राजधानीमा ‘टुटल’ प्रयोगकर्ताहरु बढ्दै - राजधानीमा ‘टुटल’ प्रयोगकर्ताहरु बढ्दै
२०७५, २३ भदौ, 09:08:51 AM
काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालमा ‘टुटल’ प्रयोगकर्ता बढ्ने क्रम जारी रहेको छ । एक प्रकारले भन्ने हो भने, यो नेपाली माटो सुहाउँदो उद्यम जस्तै देखिएको छ । स्थानीय स्रोत र प्रविधिको संयोजनबाट व्यावसायिक तथा सामाजिक हितका काम गर्ने युवाको सङ्ख्या बाक्लिँदै छ । यस्तैमा विगत २ वर्षअघि स्थापना भएको ‘टुटल’ले राजधानीमा मोटरसाइकल तथा स्कूटरमा यात्रा साझेदार बनेर हजारौं यात्रुलाई सेवा दिइरहेको छ ।
अव्यवस्थित शहरीकरण, बढ्दो ट्राफिक जामलगायत समस्याले राजधानीका यात्रुले दिनहुँ कष्ट भोग्दै आएका छन् । भनेको समयमा गाडी नपाउने, पाइहाले पनि कार्यालय समयमा अत्यधिक भीड बढ्ने र ट्याक्सी चढ्दा अधिक खर्च हुने र समयमा भनेको ठाउँमा पुग्न नसकिने समस्याले राजधानीवासी आजित छन् । यस्तै परिस्थितिलाई सहज बनाउन टुटल अहिले सबैभन्दा राम्रो विकल्प बनेको छ ।
मोटरसाइकल तथा स्कूटरधनीले टुटलको सदस्य बनेपछि हरेक दिन आफू यात्रा गर्ने रूटबारे एप्समा बताउँछन् । यसैलाई आधार मानेर टुटलका प्रयोगकर्ताले आफू जाने रूट पत्ता लगाई मोबाइल एप्समार्फत नै चालक भेटेर यात्रा गर्छन् । यस प्रविधिका परिकल्पनाकार हुन् शिक्षित भट्ट ।
भट्ट र साथीहरू मिलेर जनवरी २०१७ मा टुटलको स्थापना गरे । त्यसयता आजसम्म करीब १ लाख जना भन्दा बढीले टुटल एप्स डाउनलोड गरिसकेका छन् । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका भट्टका अनुसार अहिले दैनिक २ हजार जना बाइक राइडरले नियमित सेवा दिइरहेका छन् । ‘आजभोलि मनसुन सिजन भएकाले यात्रुको कमी हुनु स्वाभाविक नै हो,’ उनले भने, ‘तर जो टुटलको प्रयोगमा अभ्यस्त छन्, उनीहरूले अहिले पनि सेवा लिइरहेका छन् ।’
सुरुवाती दिनहरु सम्झँदै भने ः– ‘हामीले पहिला शिक्षाक्षेत्रमा सूचना प्रविधिलाई जोडेर काम गरेका थियौं । यसपछि काठमाडौं उपत्यकाको सवारी चाप कम गर्न साझा बसलाई ट्र्याक गर्ने एप्स बनायौ । साझा बसमा यात्रा गर्नेहरू प्रविधिसँग अभ्यस्त हुन गाह्रो मानेकाले त्यसलाई पनि अघि बढाएनौं,’ निचोडमा उनले भने, ‘यसपछि हामीले टुटलको परिकल्पना गर्‍यौं र यो सफल भयो पनि ।’
‘यदि काठमाडौंमा घरधनीले घर भाडामा नलगाए हामीलाई कति घर चाहिन्थ्यो होला ?’ भट्टको यो प्रश्नमै उत्तर लुकेको छ । घरधनीले घर भाडामा लगाएका छन् र यति थोरै घर सङ्ख्याले उपत्यकामा ४० लाख मानिस अटेका छन् । यसरी नै सवारीसाधनमा पनि साझेदारी गरे हामीलाई थोरै सवारीले पनि पुग्ने बताउँछन् उनी । ‘यसै मान्यतामा रहेर ‘सीट शेयरिङ’ अवधारणा स्थापित गराउन टुटल प्रभावकारी हुने विश्वास लिएका छौं,’ उनले थपे ।
पाल्पाका अनिल परियार काठमाडौंमा भनेजस्तो रोजगारी नपाएर हैरान थिए । उनले १० महीनाअघि टुटलमा राइडरको सदस्यता लिएदेखि खाली हात बस्नुपरेको छैन । ‘शुरू शुरूमा अफ्ठयारो लागे पनि अहिले यो काम सहज लाग्छ,’ उनले भने, ‘प्रायः यात्रु युवा र कार्यालयमा काम गर्नेहरू नै बढी हुन्छन् ।’ अनिलजस्तै हजारौं युवा राजधानीमा बसेर प्रविधिलाई आत्मसात् गर्दै रोजगारीमा सक्रिय छन् । उनीहरू सबैको एकै मत छ, ‘टुटलले नै यो सम्भव गराएको हो ।’
वर्षामा पनि सक्रिय
टुटलको कार्यालयमा पुग्दा त्यहाँ एक कुनामा केही थान रेनकोट थुपारिएका थिए । प्रविधिको काम गर्ने कम्पनीमा किन रेनकोट राखियो भन्ने जिज्ञासा जो कोहीलाई हुन सक्छ । तर, यी रेनकोट आफ्ना राइडर एवम् सेवाग्राहीलाई वर्षाबाट जोगाउन कम्पनीले नै किनेर ल्याएको हो । ‘वर्षाको समय मोटरसाइकल र स्कूटरमा यात्रा निकै सकस हुने भएकाले हामीले जीउ पूरा ढाक्ने रेनकोट राखेका हौं,’ टुटलमा कार्यरत एक कर्मचारीले भने । दीपक मानन्धर टुटलमा सदस्य बनी राइडर बनेको १ वर्ष भयो । ‘वर्षाको समयमा हामी दुई ओटासम्म रेनकोट ओढेर पनि सेवा दिइरहेका छौं,’ उनले थपे, ‘यात्रु कम भए भन्दैमा काम छाडेका छैनौं ।’ साथै, कम्पनीले पनि मौसमसम्बन्धी जानकारी हेरेर मात्र सेवा लिन यात्रुलाई अनुरोध गरेको छ । ‘वर्षामा सेवाग्राहीको सङ्ख्या कम भए पनि टुटलले आफ्नो नियमित काममा कुनै कमी गरेको छैन,’ सीईओ भट्टले भने ।
के हो टुटल ?
टुटल वास्तवमा के हो ? यसको अर्थ के हो भन्नेलगायत जिज्ञासा धेरैलाई हुन सक्छ । टुटल भनेको अङ्ग्रेजीमा फुर्सदिलो, सुविधायुक्त वा सहज राइडिङ भन्ने बुझिन्छ । यो सेवा प्रयोग गर्न स्मार्टफोनमा ‘टुटल’ एप्स डाउनलोड गर्नुपर्छ । उक्त एप्समा आफ्नो मोबाइल नम्बरलाई युजरनेम बनाएर खाता खोलिसकेपछि चाहेको स्थानमा ‘टुटल’मा रजिष्टर भएका बाइकको सेवा लिन सकिन्छ । अहिले यो सेवा उपत्यकामा मात्रै उपलब्ध छ । एप्समा आफू रहेको र पुग्ने ठाउँ उल्लेख गरेर ‘बूक’ गरेको छोटो समयमै त्यस स्थानमा उपलब्ध ‘टुटल पार्टनर’ले सम्पर्क गर्छन्  । यस्तै, आफूलाई कति समयपछि सेवा चाहिएको हो, ‘बूक’ गर्ने क्रममा त्यो पनि उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
एप्समा आफू पुग्ने स्थानसम्मको दूरी, त्यसका लागि लाग्ने रकम पनि उल्लेख हुन्छ । बूक गरिसकेपछि आफूलाई लिन आइरहेको बाइकबारे एप्समै जानकारी लिन सकिन्छ  । आफूले दिएको लोकेसशनमा आइरहेको बाइक एप्सको नक्सामा देखिन्छ  । उसले बाटो भुलेमा फोन गरेर सचेत गराउन पनि सकिन्छ ।
टुटलमार्फत बाइकमा यात्रा गर्दा न्यूनतम ३ किलोमिटरसम्म ६० रुपैयाँ लाग्छ । ३ देखि ६ किलोमिटरसम्म प्रतिकिलोमिटर थप १८ रुपैयाँ र त्योभन्दा बढी भएमा प्रतिकिमी २५ रुपैयाँ लाग्छ । उपत्यकामा सञ्चालित यो सेवा बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म उपलब्ध हुन्छ । यो सेवा दिएबापत बाइकरले ८० प्रतिशत रकम लिन्छ भने टुटलले २० प्रतिशत लिने गरेको छ ।
टुटललाई धेरैले यातायात कम्पनी ठान्ने गरेको सीईओ भट्टको अनुभव छ । ‘टुटल विशुद्ध प्रविधि कम्पनी हो,’ उनले भने, ‘यो एप्स सञ्चालन टेक्नोलोजी कम्पनी ‘थ्री सिक्स्टी’बाट भइरहेको छ ।’
‘टुटल’ र ‘पठाओ’ मा आबद्ध चालकमाथि प्रहरीको नजर
‘टुटल’ र ‘पठाओ’ को अवैध धन्दा, निजी सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिँदै प्रहरी